'Sizomkhipha ngevoti ePhalamende uma engasuli uZuma' - Gigaba | Isolezwe
'Sizomkhipha ngevoti ePhalamende uma engasuli uZuma' - Gigaba
Izindaba / 14 February 2018, 11:00am / INTATHELI YESOLEZWE
UNGQONGQOSHE weziMali kuleli uMnuz Malusi Gigaba. Isithombe: ANA
UNGQONGQOSHE weziMali kuleli, uMnuz Malusi Gigaba, uthi balindele ukuthi umengameli Zuma asule esikhundleni namhlanje njengokomyalelo we-ANC kungenjalo bazomugudluza ngevoti lobungabethembi ubuholi bakhe ePhalamende.
UGigaba uveze lokhu ngesikhathi ekhuluma ohlelweni lwesiteshi sezindaba sase-United States, i-CNN, ngoLwesibili ebusuku.
"Silindele ukuthi enze into elungile. UNobhala Jikelele (Ace Magashule) ukubeke kwacaca ukuthi abaholi be-ANC balalela umyalelo uma sebekhonjwa, njengoba kwenzeka kumengameli Mbeki ngo-2008," kusho uGigaba.
UGigaba uthe uma uZuma engamemezeli ngoLwesithathu ukuthi uyasula kulesi sikhundla amalungu e-ANC ePhalamende azomkhipha ngevoti lokungabethembi ubuholi bakhe.
Uthe kulindeleke ukuthi umengameli enze isimemezelo kwabezindaba namhlanje ngo-10 ekuseni, nokho ihhovisi likamengameli ligcine likuchithile lokho.
Ngesikhathi abezindaba beqhinqe ngaphandle e-Union Buildings, ePitoli, ihhovisi likamengameli lishicilele isitatimende libazisa ukuthi uZuma akazange abize isithangami nabezindaba.
"Sifisa ukwazisa abezindaba ukuthi umengameli Jacob Zuma akaze asibize isithangami nabezindaba namhlanje. Sicela abezindaba balinde umyalezo ovela ehhovisi likamengameli," kusho isitatimende.
UZuma ubengakaphawuli odabeni lokukhonjwa kwakhe indlela.
Usihlalo we-ANC uMnuz Gwede Mantashe izolo ntambama ucashunwe yiTimes Live ekhuluma emcimbini obuse-Eastern Cape ethi uma uZuma engasuli njengomengameli wezwe 'uzodeleleka' ePhalamende.
"Siyethemba umengameli Zuma uyaqonda ukuthi asilwi naye, ngoba uma engasuli, uzodelelwa osomathuba ePhalamende. Uma uziba umyalelo we-ANC wokuthi usule esikhundleni, usishiya nesinqumo sokuthi sikudedele ushiswe yivoti lokungabethembi ubuholi bakho ngoba lokho kuchaza ukuthi awusayihloniphi inhlangano," kusho uMantashe.
Uqhube wathi kuyigunya le-ANC ukujuba nokuhoxisa amalungu ayo ezikhundleni.